DHEGEYSO-Puntland oo fariin kulul u dirtay maamulka Soomaaliland. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Puntland oo fariin kulul u dirtay maamulka Soomaaliland.
Luulyo 16, 2016 4:26 b 0
Wasiirka Wasaaradda Amniga dawladda Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo maanta 16-July-2016 shir Jaraa’id ku qabtay Aqalka Madaxtooyada dawladda Puntland ee magaalada Gaalkacyo ayaa farriin adag u diray maamulka Somaliland oo maalimihii ugu dambeeyey dhaq-dhaqaaqyo ciidan ka wadey gobollada Sanaag iyo Haylaan.
Wasiirka ayaa sheegay in maamulka Somaliland uu daan-daansi qaawan ka wado gobollada Sanaag iyo Haylaan oo ka mid ah gobollada Puntland isla markaana ah gobollo kusoo caano maalay nabad iyo xasillooni gaamurtey.
Wasiir Qarjab ayaa sidoo kale tilmaamay in aanay munaasib ahayn xilligaan in sabab loo noqdo dhiig Soomaaliyeed oo daata, isla markaana loo baahan yahay in ay Soomaaliland ka waantowdo fadqallalada ay ka wado dhulka nabadda ah ee Puntland, sidoo kale waxaa uu sheegay in aanay dawladda Puntland nabad ka qaadanayn daan-daansiga qaawan ee lagu hayo dalkeeda iyo dadkeeda.
“maanta looma baahna in inta lasoo abaabulo dagaal dhexmara Puntland iyo Somaliland la daadiyo dhiig Soomaaliyeed, waanan cambaaraynaynaa arrintaasi, balse waxaan idiin caddaynayaa in aanay dawladda Puntland nabad ka qaadanayn cid walba oo ku soo xad gudubta xuduudeheeda” ayuu yiri Wasiir Qarjab.
Wasiirku waxa uu kaloo sheegay in aanay dawladda Puntland cidna duullaan ku ahayn, ayna diyaar u tahay in ay nabad iyo deris wanaag kula noolaato cid walba ay xuduud wadaagaan, waxaase uu biyo kama dhibcaan ku tilmaamay in aanay Puntland wax gor-gortan ah ka geleyn xuduudeheeda, wixii cawaaqib xumo ah ee halkaasi ka yimaadana ay dusha u ridan doonto maamulka Somaliland.
Ugu dambayn, Wasiirka Amnigu waxa uu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed iyo Beesha caalamkaba in ay isha ku hayaan daandaansiga iyo nabad-gelya darrada uu maamulka Somaliland ka wado gobollada Puntland, waxaana uu u sheegay in cawaaqib xumada ka dhalata duullaankaasi ay dusha u ridan doonto maamulka Somaliland.
DHEGEYSO-Agaasime Tigaana oo ka warbixiyey tartanka maamulada ee kasocda Muqdisho.